8 Amathrendi kuRetail Software Technology | Martech Zone
Imboni yokuthengisa imboni enkulu eyenza imisebenzi eminingi kanye nemisebenzi. Kulokhu okuthunyelwe, sizoxoxa ngamathrendi aphezulu kusoftware yokuthengisa. Ngaphandle kokulinda okuningi, masiqhubekele phambili kumathrendi.
Izindlela zokukhokha - Izikhwama zedijithali nezindlela ezahlukahlukene zokukhokha zengeza ukuguquguquka kwezinkokhelo ezenziwa online. Abathengisi bathola indlela elula kodwa ephephile yokuhlangabezana nezidingo zokukhokha zamakhasimende. Ezindleleni zendabuko, imali kuphela eyavunyelwa njengendlela yokukhokha eyadala ubunzima obukhulu bokugcina, ngokuhamba kwesikhathi kwaqala ukusetshenziswa kwamakhadi edebithi namakhadi wesikweletu okwakulula kodwa inqubo yezinyathelo eziningi futhi edla isikhathi. Ezikhathini zanamuhla wonke amabhuloho asewelile futhi abantu sebeqalile ukukhetha izikhwama zedijithali ukugcina imali yabo nokwenza izinkokhelo. Lokhu kusiza ukusheshisa izinkokhelo zamakhasimende futhi ngasikhathi sinye, abathengisi bathola izinzuzo zemali ephansi yokuthengiselana.
Ukuqwashisa Komphakathi - Amakhasimende nawo ahlala ekhathazekile maqondana nemisebenzi yezenhlalo, nokuqwashisa okwenziwa yinkampani. Abathengisi bahlala benengcindezi yokwenza imisebenzi enobungane. Amayunithi amabhizinisi anquma ukunciphisa ukusetshenziswa kwepulasitiki, amakhemikhali, isikhumba, uboya, nokunye okuningi ukuze uhlale ulungele i-eco. Amayunithi amaningi ebhizinisi akhetha ukupakisha okubolayo okubolayo okusiza imvelo.
Ukuqagela Ukuhlaziya - Imboni yokuthengisa isebenza ngenqwaba yedatha futhi isiqhutshwa yidatha. Idatha yesikhathi esizayo elinganiselwayo ingasiza amabhizinisi ukuthi enze izinqumo ezihlakaniphile futhi ahlaziye izindawo ezahlukahlukene ezinjengamandla okuthenga nemibiko, indlela yokuziphatha yabathengi, izitayela, nokuhlaziya uhambo lwabo. Amaphethini wokuziphatha kwekhasimende nemisebenzi kungasiza ekwehliseni imikhiqizo engathengwa futhi kuthuthukise okunye ukuthengisa ngokubheka okuthandwa yikhasimende nezintshisekelo zalo. Amaphethini ezaphulelo zabahlinzeki nawo angaqondakala futhi ukuthenga kungenziwa ngokufanele ukuthola okunikezwayo okungcono kakhulu.
Web Izicelo - Izicelo ezenzelwe indawo ezaziwa ngesiphequluli azidingi ukulandwa kohlelo lokusebenza lweselula futhi ziyisixazululo esihle njengoba zinikela ngezinhlobonhlobo zezinzuzo njengokubuyekezwa okulula, ukwesekwa kwesisekelo esifanayo, uhlaka lobungani, oluphendula kakhulu, aludingi ikhwalithi ephezulu i-inthanethi, ngayinye isetshenziswa kalula izinjini zokusesha futhi isekela nezaziso.
Ukuhlakanipha okungekhona okwangempela - Imiyalezo ehlakaniphile namarobhothi kusiza amabhizinisi ngokugcina yonke imininingwane yezezimali futhi lezi zinhlelo ziyakwazi ukunikeza izincomo ezenziwe zaba ngezakho, ukuthola imikhiqizo eyiyo, ukuzulazula okulula, izintandokazi zamakhasimende, nokunye okuningi.
Usizo Ngezwi - Abasebenzisi basebenzisa abasizi bezwi ohambweni lwabo lokuthenga online nge-Amazon Alexa, i-google home, iSiri nabanye abaningi njengabalingani bemoto nabasizi basekhaya. Abathengisi bakhetha lobu buchwepheshe kanye nosesho lwezwi olususelwa ekuthengiseni. Abasizi bezwi bathambekele ekuthembekeni kakhulu njengoba beshesha futhi befinyeleleka kalula ekunikezeni indlela yokusebenza engenazandla. Lokhu futhi kuza nemikhawulo yobunzima ekukhiqizeni imiphumela yosesho, ukuphequlula okunzima ngenxa yohlu olukhulu lwemiphumela yosesho kanye neminye embalwa.
Ukulandelwa Kokusungula - Abathengisi ngaso sonke isikhathi badinga ukuphatha imisebenzi eminingi ndawonye futhi badinga amathuluzi okuphatha nezici eziningi zokuphatha nokugcina ukulandelela okusungulwayo. Izici zakamuva ezitholakala kusoftware yokuthengisa zifaka phakathi amaketanga okuhlinzeka okuzenzakalelayo, amasistimu wokuphatha, ukubikezela ukuthengisa, ukuthola into yesitoko, izibalo zesikhathi sangempela, nokunye okuningi. Konke lokhu kungasiza ekwehliseni umthwalo omningi wabathengisi ngokuphatha imisebenzi eminingi online.
Usesho olubonakalayo - Ukusesha okubonakalayo yithuba elilodwa lebhizinisi elihamba phambili elethulwe ezikhathini zamuva. Ukusesha okubonakalayo kuvumela abasebenzisi ukuthi bathole kalula imikhiqizo ebekade beyifuna kusukela kudala. Lokhu kusondeza abasebenzisi ekuthengeni njengoba imiphumela yosesho ifana kahle nezidingo zabo.
Lezi bekuyizimbalwa ezimbalwa zamathrendi aphezulu kusoftware yokuthengisa futhi ngoshintsho kubuchwepheshe nakuzibuyekezo, izitayela eziningi zengezwa ngokuqhubekayo embonini. Ukuthola uhlu lobuchwepheshe besoftware obusezingeni eliphezulu futhi obulinganisiwe, hlola i-Techimply.
Tags: izinhlelo zokusebenza ezenzelwe isiphequluliyokusungula kokulandelaizinketho zokukhokhai-analytics yokubikezelatekutsengisaokudayiswayo aiisoftware yokuthengisaizitayela zesoftware yokuthengisaizitayela zobuchwepheshe bokuthengisaizitayela zokuthengisaukuqaphela umphakathiukusesha okubukwayousizo lwezwiizinhlelo zokusebenza zewebhu
UJui Bhatia uyi-Software Analyst ku Ngobuchwepheshe, ENdiya. Ngolwazi emikhakheni eqhutshwa ubuchwepheshe, ulusebenzile ulwazi lwakhe ngokuthi kanjani (ama) nokuthi yini okufanele yenziwe ngebhizinisi. Futhi, unesifiso sokuhlanganyela ngolwazi lwakhe ngezihloko ezimbalwa ezihlobene nobuchwepheshe nabafundi abangasiza noma yiluphi uhlobo lwebhizinisi.